एनआरएनए अमेरिका : प्रतिनिधि छनौट नाटकीय मोडमा, क्षेत्रिय संयोजक गौरी जोशीको दोहोरो मापदण्ड ? – Durbin Nepal News
एनआरएनए अमेरिका : प्रतिनिधि छनौट नाटकीय मोडमा, क्षेत्रिय संयोजक गौरी जोशीको दोहोरो मापदण्ड ?
अशोज १०, २०७६ ३:३५ मा प्रकाशित
बिष्णुहरि घिमिरे –दूरबिन नेपाल
अमेरिका, सेप्टेम्वर २७ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आसन्न विश्व सम्मेलनमा अमेरिकाबाट सहभागि हुने प्रतिनिधिको छनौट प्रकरण नाटकीय मोडमा पुगेको छ । त्यसो त पछिल्ला केही बर्षमा एनआरएनए अमेरिकामा विवादास्पद पात्रको रुपमा छाएका क्षेत्रिय संयोजक गौरीराज जोशीको महत्वकांक्षाले पनि यस प्रकरणलाई बल पुर्याएको देखिन्छ ।
जोशीलाई एनआरएनए अमेरिकाको हरेक गतिविधिमा हङ्गमा गर्ने र अन्तमा आफुलाई फाइदा हुने गरि सल्टाउने व्यक्तिको रुपमा चित्रण गरिन्छ । यस अघिका थुप्रै घटनाले त्यो आरोपलाई बल पुगेको छ ।
संगठनलाई शुरुवात देखि नै कसरी पारदर्शी बनाउने भन्दा पनि आफ्नो पद कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने उद्देश्य बोकेका एनआरएनए अमेरिकाका अन्य अगुवाहरु पनि यस प्रकरणमा निर्दोश छैनन् । यस्तो प्रकरणका मुख्य पात्रमा निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर केशव पौडेल, बर्तमान अध्यक्ष सुनिल शाह पनि बराबरी दोषि छन् ।
डाक्टर पौडेल एनआरएनए आइसीसीमा महासचिव र जोशी सचिवको उमेद्वार हुन् । दुबैले आ-आफ्नो अनुकुलका प्रतिनिधि छनौटमा शुरु देखि नै रस्साकस्सी गरेका हुन् । यो प्रकरणमा अध्यक्ष शाहको भुमिका शंकास्पद देखिएको छ । एनआरएनए अमेरिकाको निर्वाचनमा शाहलाई जिताउन डाक्टर पौडेल समुहले मुख्य भूमिका खेलेको थियो । तर अहिले प्रतिनिधि छनौटमा शाहले आफुलाई भन्दा जोशीलाई अनुकुल हुने गरि काम गरेको गुनासो पौडेलले आफु निकट सँग गर्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समय अर्धभुमिगत बनेका अध्यक्ष शाहले गौरी जोशी- हरिबोल भण्डारी समुहले आफुलाई काम गर्न नदिएको, प्रतिनिध छनौटमा उनीहरुले मनोमानी गरेको गुनासो गरेका छन् । हुन् पनि हाल सम्म प्रकाशित प्रतिनिधिहरुको नामावलीमा गौरी जोशी नै हावी भएका छन् । विधान र संस्थागत पद्दती भन्दा पनि कुन व्यक्तिले आफुलाई भोट दिन्छ भन्ने एकिन गरेर नामावली प्रकाशित गरिएको छ । यती सम्मकी एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनका बेला सदस्य बन्न हुदैन भन्ने अभियानमा रहेका र निर्वाचन अघि एनआरएनएको सदस्यता समेत नदिएका व्यक्ति अहिले विश्व सम्मेलनमा अमेरिकाको प्रतिनिधि हुदै छन् । ती मध्येमा केहि पत्रकारका नेता समेत रहेका छन् ।
एनआरएनए विश्व सम्मेलनका लागि प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया प्रति आम सर्वसाधरण मात्र होइन कार्यसमितिका अधिकांस व्यक्ति असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले आफ्नो असन्तुष्टि सामाजिक सन्जाल मार्फत नै सार्वजनिक गरेका छन् ।
जोशीको पानी माथि ओभानो बन्ने दाउ
नेपालीमा एउटा उखान छ । “आफै ….. आफै धामी” । यो उखान अहिले गौरी जोशीमा लागु भएको छ । विश्व सम्मेलनका लागि तेस्रो चरणको प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक हुदाँ सम्म जोशी पल्लाभारी भएका छन् । सबै भन्दा धेरै उनी र हरिबोल भण्डारी समुहका व्यक्ति देखिएका छन् । तर शुक्रवार विहान मात्र जोशीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै हालको प्रतिनिधि छनौटमा चित्त बुझाउन नसकिएकोले सो प्रकरणमा छानविन गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाएको जनाएका छन् ।
हेर्दा सोझा देखिने गौरी जोशि निकै कुटिल व्यक्ति हुन् । लमजुङ पुर्ख्यौली घर भएका र पछि चितवन बसाइ सरेका जोशी पछिल्लो समय अमेरिकाको टेक्सासमा सफल व्यापारीको रुपमा उदाएका छन् । लमजुङ र चितवनका लागि नौला जोशी पैसा कमाए पछि अहिले पदको महत्वकांक्षी बनेका छन् । हुनत एनआरएनए त्यस्तै व्यक्तिहरुका लागि नै हो । तर सस्था भए पछि सस्थागत रुपमा चल्नु पर्छ भन्ने मान्यता हो ।
गौरी जोशीको एनआरएनएको इन्ट्री नै विवादास्पद रुपमा भएको हो । विधानत उनी अध्यक्षका लागि अयोग्य थिए । तर पैसा भए पछि एनआरएनमा सबै कुरा गौण हुन भन्ने मान्यता बोक्ने जोशी आफु अध्यक्षको उमेदवार बन्न पाउनु पर्छ भन्दै अदालत सम्म पुगे । पछि क्षेत्रिय स‌ंयोजकको पद पक्का भए पछि उनी कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिरिएका थिए । पद भन्दा पनि संस्थाको प्रगति चाहेको भए उनले एनआरएनए अमेरिकाको अध्यक्ष पदका लागि योग्य हो होइन भन्ने कानुनी व्याख्या अदालतबाट गराउदा भविश्यमा पनि नजिर बस्ने थियो । तर उनी संस्थालाई संस्थागत बनाउन भन्दा पनि आफु अब कसरी पदमा र चर्चामा आउने भन्ने उद्देश्य हो भन्ने प्रष्ट देखिन्थो । त्यसो त उनले आफु सचिव पदमा कुमार पन्तको टिममा पर्ने संकेत पाए पछि एनआरएनए अमेरिकाको निर्वाचन रोक्ने र अमेरिकाको कार्यसमितलाई खारेज गर्दै आफु अनुकुलको तदर्थ समिति नै बनाउन लागेका थिए । उनको सो प्रयास एनआरएन आइसीसी अध्यक्ष भवन भट्टका कारण विफल भएको थियो ।
लमजुङको चितिमा मध्यम परिवारमा जन्मिएका जोशीलाई अब सामाजिक व्यक्ति हुने भोक जागेको छ । जव मान्छेलाई जब भोक जाग्छ उसले जे पनि गर्दछ । ‘युद्द र प्रेममा सबै कुरा जायज हुन्छ’ भने जस्तै जोशीले आफु पदमा आउनका लागि हरेक कुरा जाहेज हुन्छ भन्ने गरेका छन् । उनी ,अमेरिकामा हरिबोल भण्डारी मार्काबाट काँग्रेस नजिक देखिने र बाहिर कुमार पन्थ मार्काबाट कम्युनिष्ट नजिक देखिने गरेका छन् । टेक्सासका अर्का व्यापारी हरिबोल यस्ता व्यक्ति हुन जसले अमेरिकामा कम्युनिष्टलाई स‌ंरक्षण दिने र नेपालमा नेपाली काँग्रेसको महासमिति सदस्य देखि केन्द्रिय सदस्य ताक्ने । केही नेतालाई ‘उपहार’ लगिदिएको भरमा उनले नेपालमा सदैव कार्यक्षेत्रमा खटिने एक कर्मठ कार्यकर्ताको भाग खोस्दै आएका छन् ।
संस्थालाई चरम विवादमा लैजाने र अन्तिममा आफुलाई पुरै फाइदा हुने भए पछि विवाद सल्लाएको जस लिने गर्दै आएका जोशीको पछिल्लो विज्ञप्ती ‘आफु पानी माथि ओभानो देखिनका लागि’ नै हो । एकातीर आफ्ना प्रतिनिधि धेरै पार्ने अर्को तिर छानविन समिति पनि बनाउने गरि जोशीले सडक र सदन दुबैमा कब्जा गराउने दाउ हानेका छन् ।
डा. पौडेलको पुन्पुरोमा हात
एनआरएनए अमेरिकामा सबै भन्दा अपजसी पात्र हुन भने त्यो डाक्टर केशव पौडेल नै हुन् । नेपालमा नै चिकित्सक पौडेल अमेरिकामा आएर पनि सोही पेशामा जमेर बसेका छन् । उनी अमेरिकामा चिकित्साक्षेत्रमा उपल्लो पदमा पुग्ने कमै नेपाली मध्येमा पर्दछन् । न्युमेक्सिको राज्यमा उनी मेडिकल डाइरेक्टर हुन् ।
नेपालमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षण अस्पताल (टिचिङ्ग) मा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा दुई कार्यकाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति र नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रिय सदस्य समेत बनेका पौडेललाई उनका नजिकाहरु आफ्नो र अरुको व्यक्ति छुट्याउन नसक्ने पात्रको रुपमा चित्रण गर्दछन् ।
एनआरएनएलाई गैर राजनीतिक संस्था भन्ने गरिन्छ । तर यसमा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका रसियन व्यापारीहरुको दवदवा नै रहदै आएको छ । उनीहरुको चाहाना गैरकम्युनिष्ट पृष्टभूमिको व्यक्ति एनआरएनए आइसीसीको नेतृत्वमा नपुगोस भन्ने नै हो । युरोप, अमेरिका लगायतका देशमा गैर कम्युनिष्टहरुले बहुमत छ ।
सगरमाथाका सफल आरोहि लामो समय सम्म एनआरएनए अभियानमा सक्रिय एसी शेर्पालाई माथ खुवाउदै गौरी जोशीलाई क्षेत्रिय संयोजकको पगरी लगाउन डाक्टर पौडेलको मुख्य भूमिका थियो । त्यहि समयमा नै डाक्टरका निकटले उनलाई गलत कदम नचाल्न सुझाएका थिए । तर उनले गौरी जोशीको कुटिल चाल बुझ्नै सकेनन ।
यस्तै पछिल्लो समय आफैले बनाएक अध्यक्ष पनि गौरी तिर नजिकिन थालेको शंका गरे पछि उनी अहिले पुन्पुरोमा हात भने जस्तो गर्न थालेको उनका निकटले बताएका छन् ।
इतिहासकै कमजोर अध्यक्ष ?
एनआरएनए अमेरिकाका बर्तमान अध्यक्ष सुनिल शाह इतिहासकै कमजोर देखिएका छन् । उनको निर्णयमा सर्वसाधरणले मात्र होइन कार्यसमितिले नै सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि दिदा समेत शाह अर्धभुमिगत बनेका छन् । प्रश्नबाट भाग्ने व्यक्तिको नियत गलत हुन्छ । उनले गरेको निर्णयमा आम असन्तुष्टि आउछ भने त्यसको विधि र प्रक्रियाका बारेमा जनाकारी दिनु पर्दछ । तर उनी त्यो अवसरबाट चुकेका छन् । उनी आफै सार्वनीक रुपमा बाहिर नआए पनि आफु निकटका सँग एनआरएनएका सस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको सोझै दवावका कारण विश्व सम्मेलनका लागि प्रतिनिध छनौटको प्रक्रियाको तालाचाबी गौरी जोशीलाई सुम्पनु परेको दुखेसो गरेका छन् । यदी त्यो हो भने शाह इतिहास कै कमजोर अध्यक्ष बनेका छन् । जसले दवावको भरमा आफ्नो अधिकार अरुलाई सुम्पिएको छ ।
जहाँ जहाँ गैर कम्युनिष्टहरुको बहुमत त त्यहाँ विवाद शृजना गराउने र अन्तमा केन्द्रको हस्तक्षेपकारी भुमिकाको सृजना गराइ आफु अनुकुल व्यक्ति प्रतिनिधि चयन गरि केन्द्रमा सिन्डिकेट कायम राख्नका लागि अहिले अमेरिकामा गौरी जोशीलाई प्रयोग गरिएको छ ।
एनआरएनए केन्द्रको खेल
एनआरएनएलाई गैर राजनीतिक संस्था भन्ने गरिन्छ । तर यसमा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका रसियन व्यापारीहरुको दवदवा नै रहदै आएको छ । उनीहरुको चाहाना गैरकम्युनिष्ट पृष्टभूमिको व्यक्ति एनआरएनए आइसीसीको नेतृत्वमा नपुगोस भन्ने नै हो । युरोप, अमेरिका लगायतका देशमा गैर कम्युनिष्टहरुले बहुमत छ । जहाँ जहाँ गैर कम्युनिष्टहरुको बहुमत त त्यहाँ विवाद शृजना गराउने र अन्तमा केन्द्रको हस्तक्षेपकारी भुमिकाको सृजना गराइ आफु अनुकुल व्यक्ति प्रतिनिधि चयन गरि केन्द्रमा सिन्डिकेट कायम राख्नका लागि अहिले अमेरिकामा गौरी जोशीलाई प्रयोग गरिएको छ ।
त्यसै खेलको मतियारको रुपमा गौरी जोशीको यो पछिल्लो विज्ञप्ति आएको मानिएको छ ।
गौरी जोशीद्वारा जारी विज्ञप्ती
आदरणीय अमेरिकाबासी गैर आवासीय नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु,
सर्व प्रर्थम यहॉंहरु सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कारको अभिवादन ब्यक्त गर्दछु। यतिखेर हामी गैर आवासीय नेपालीहरु आफ्नो साझा संस्था अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको नवौं सम्मेलनको पुर्व सन्ध्यामा छौ। आफ्ना प्रतिनिधीहरु मार्फत हरेक संघ संस्थाको नयॉं नेतृत्व चयन हुने बिश्वब्यापी सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक मान्यता र प्रचलन नै हो।
गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको आगामी ओक्टुवर १५-१७ काठमाण्डौमा सम्पन्न हुने अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा अमेरिकाको तर्फबाट सहभागी हुने प्रतिनिधी छनौटका सम्बन्धमा हामिले गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाका जिम्मेवार पदाधिकारी र सिंगो संस्थालाई संघले तोकेको मापदण्ड, बिधी, निर्णय र प्रक्रियाका बारेमा पटक पटक जानाकारी र अनुरोध गरेकै हो, तर हाम्रो दुर्भाग्य अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको मापदण्ड,बिधि बिधान र निर्णय बिपरित प्रतिनिधी छनौट गरी बाहिर निकाली सकेपछि मात्र हामिले थाहा पाउनु पर्ने बाध्यता गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका र यसमा संलग्न रहि लामो समय देखि काम गर्दै आउनु भएका तपाई हामी सबैका निम्ति एउटा अस्वाभाविक र दुखद् घटना हो।
म यस अमेरिकाज् क्षेत्रको क्षेत्रीय संयोजकको हैसियतले संस्थाको पारदर्शिता, बिश्वशनियता र अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदले निर्धारण गरेको मापदण्ड, बिधान र यस अघि गरिएका निर्णयहरुको अक्षरस पालना गर्नु र गराउनु मेरो पहिलो महत्वपुर्ण कर्तब्य र दायित्वबाट बिमुख रहन सकिन, त्यसैले संघको बिधान, यस पुर्व भएका निर्णय र मापदण्ड बिपरित प्रतिनिधी छनौट गरिएकाले गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्य श्री प्रकाश सापकोटाज्यूको संयोजकत्वमा निम्न तल उल्लेखित सदस्यहरु रहेको जॉंचबुझ, छानबिन तथा पुन: सिफारिस समिति गठन गरेको ब्यहोरा यसै बिज्ञप्ति मार्फत जानाकारी गराउँदछु, साथै उक्त समितिले भोलीको मिति देखि पॉंचदिन भित्र प्रतिनिधी छनौटमा प्रक्रियामा भएका त्रुटीलाई पुनरावलोकन गरी हाम्रो संघले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम प्रतिनिधी छनौट गरी अमेरिकाज् क्षेत्रीय संयोजकलाई पठाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
हाललाई यस बारेमा थप निर्णय र निर्देशन नआए सम्म कुनैपनि प्रक्रिया अगाडी नबढाउनु हुन गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकालाई यसै मार्फत निर्देशन गरिन्छ।
श्री प्रकाश सापकोटा
सदस्य, गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद,
श्री धर्म भट्टराई
श्री राजन त्रिपाठी
श्री जेदू पोख्रेल
श्री प्रमोद सिटौला
सदस्य, बिधान समिति
गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद,
गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद,अमेरिका